पहिलो भेटमै दीपेन्द्रले देवयानीप्रतिको प्रेम लुकाउन सकेनन् ! - Enepalese.com
पहिलो भेटमै दीपेन्द्रले देवयानीप्रतिको प्रेम लुकाउन सकेनन् !
इनेप्लिज २०७८ असोज २७ गते ११:०९ मा प्रकाशित
युवराज दीपेन्द्र बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित इटन कलेजमा पढ्दा उनका सहपाठी थिए चार्ल्स नामक बेलायती किशोर।चार्ल्सका बाबु त्यस बेला बेलायती संसद्का लर्ड थिए। र,चार्ल्सकी बहिनी थिइन्– शेली।युवराज दीपेन्द्रको बेलायत अध्ययन क्रममा ‘लोकल गार्जियन’ थिए, शेलीका बाबु लर्ड।युवराज दीपेन्द्र २०४४ देखि २०४८ सम्म लन्डन बसेका थिए।
त्यसै बेला कुनै तालिमको सिलसिलामा देवयानी पनि लन्डन पुगेकी थिइन्।संयोग के भने लन्डन बसाइमै देवयानीकी साथी बनिन् शेली।र,शेलीका बाबुले नै देवयानीका निम्ति पनि लन्डन रहँदा ‘लोकल गार्जियनसिप’ लिएका थिए।फुर्सदमा देवयानी शेलीकहाँ पुग्थिन् भने दीपेन्द्र चार्ल्सकहाँ।जवानी चढ्दै गएका दीपेन्द्र र देवयानीको पहिलो भेट चार्ल्स र शेलीको घरमै भएको थियो।
पश्चिमा मुलुकमा युवकयुवती बिनाहिचकिचाहट एकअर्कालाई प्रेम प्रस्ताव राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उमेर पुगेका नेपाली शाही परिवार र राणा परिवारका यी दुई किशोरकिशोरीले पहिलो भेटमै एकअर्कालाई मनमनै मन पराइहाले । पहिलो भेटमै दीपेन्द्रले आफूमा पल्हाएको देवयानीप्रतिको प्रेम लुकाउन सकेनन् । उमेरमा देवयानी दीपेन्द्रभन्दा जेठी थिइन् ।
दीपेन्द्रले चार्ल्स एवं शेलीकै बीचमा त्यो दिन देवयानीलाई ठट्टैठट्टामा भने रे, ‘तिमी त नेपालकी बडामहारानी हुन लायक रहिछौ नि यार ।’ यसरी त्यो दिनदेखि सुरु भयो दीपेन्द्र र देवयानीबीचको प्रेमको सिलसिला ।
देवयानीको युवराजसँग प्रेम छ भन्ने जानकारी राजारानीले पाए पनि देवयानीका मातापिता पशुपतिशमशेर र उषाराजे सिन्धिया राणा २०५३ सम्म अनभिज्ञ थिए । यही अवधिमा दीपेन्द्रको सुप्रिया शाहसँग पनि ‘अफेयर्स’ चलिरहेको थियो, जो मुमा बडामहारानी रत्नकी दिदीकी नातिनी थिइन् ।
दीपेन्द्रको उमेर घर्किंदै जाँदा युवराज्ञीका लागि दरबारका छनोटमा तीन युवती थिए– गरिमा राणा, सुप्रिया शाह र देवयानी राणा । यीमध्ये दरबारका लागि सुप्रिया पहिलो नम्बरकी योग्य बधु थिइन् भने दीपेन्द्रको पहिलो छनोटमा देवयानी । २०५० को एसएलसीकी बोर्ड फस्ट गरिमा चाहिँ राणा परिवार र शैक्षिक योग्यताका कारण चर्चामा थिइन् ।
यसै क्रममा मुमा बडामहारानी रत्नले उनले देवयानीकी आमा उषाराजेसँग पनि प्रेम प्रसंगबारे बुझबुझारथ गरेकी थिइन् । त्यसपछि मात्र उषाले युवराज दीपेन्द्र र आफ्नी छोरी देवयानीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चाल पाएकी थिइन् । उषाले भनिन् रे, ‘मेरी छोरी देवयानी मेरी मुमा (भारत, ग्वालियरकी रानी विजयाराजे सिन्धिया) सँग बसेर ज्यादै सम्पन्नतामा हुर्केकी छे । तर नेपालको राजपरिवार आर्थिक दृष्टिले दरिद्र छ, त्यहाँभित्र छोरीको जीविका कसरी चल्छ होला र ?’ देवयानीकी मावली हजुरआमा विजयाराजे सिन्धिया खड्गशमशेर (वीरशमशरेका भाइ) की ल्याइते श्रीमतीतर्फकी नातिनी थिइन् ।
युवराज दीपेन्द्रलाई आमाले खटाएर दिएको खर्चबाट गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने पशुपतिपुत्री देवयानीलाई पैसाको कुनै पर्वाह थिएन । त्यतिबेलै पनि राजधानीका बैंकमा देवयानीको नाममा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत थियो । तर दीपेन्द्रले भने युवराज भएबापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने वार्षिक २४ लाख रकममध्ये थोरैमात्र रकम आमा ऐश्वर्यबाट अड्कली–अड्कली पाउँथे ।
‘नेपालको राजपरिवार दरिद्र छ’ भन्ने उषाराजेको शब्दावली आफ्नो कानमा परेपछि रानी ऐश्वर्यले देवयानीसँग कुनै पनि हालतमा बिहे हुन नसक्ने अड्डी लिइन् । यस मामलामा राजा वीरेन्द्र निरीह र लाचार थिए । उनले कुनै हस्तक्षेप गर्न चाहेनन् । देवयानीलाई युवराज्ञी बनाउँदा भारतीय प्रभाव बढ्न सक्ने दरबारिया आकलन पनि नभएको होइन ।
यति हुँदाहुँदै पनि दीपेन्द्र एक दिन पनि देवयानीलाई नभेटिरहन सक्थेनन् । त्यसो त देवयानीले दीपेन्द्रसँग ‘प्रेम सम्बन्ध अन्त्य गरौं न त’ भन्ने प्रस्ताव समेत राखेकी थिइन् । तर उनी राजी भएनन् । सुन्दरी देवयानीको बिहेका लागि भारतको जोधपुर, भागलपुर, बरौदालगायत पुराना राज्यका राजकुमारसँग कुराकानी चल्दै थियो ।
दीपेन्द्र देवयानीको प्रेममा देवदास नै भएका थिए । आफूसँग बिहे नगरे बिष खाएर मर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । भेटघाट र भलाकुसारीमा मात्रै दीपेन्द्र र देवयानीको प्रेम सीमित थिएन, उनीहरु विदेश जाँदा एकअर्काले उपहारसमेत ल्याइदिने गरेका थिए । युवराज दीपेन्द्रले हातमा बाँधेको डेढ लाख मूल्य बराबर ओमेगा घडी देवयानीले विदेशबाट ल्याइदिएकी थिइन् । दीपेन्द्रले अक्सर बोक्ने भिडियो क्यामरासमेत देवयानीले नै ल्याइदिएको उपहार थियो ।
आफ्ना प्रिय प्रेमीका निम्ति देवयानी कतिसम्म खर्च गर्थिन् भने, उनले बेलायतबाट फर्कंदा एउटा यस्तो टिसर्ट उपहारस्वरुप ल्याइन्, जसको मूल्यमात्रै १ हजार पाउन्डभन्दा बढी थियो । दीपेन्द्रले पनि देवयानीलाई टिसर्ट, पाइन्ट, कुर्ता सलवार र जुत्ता ल्याइदिएका थिए ।
यसरी २०४८ देखि मौलाएको दीपेन्द्र–देवयानी प्रेमालाप केही गरी नतोडिने भएपछि गरिमा राणा सबैभन्दा पहिले ‘साइड’ लागिन् । उनले एक चिकित्सकसँग घरजम गरिन् । पछि सुप्रियाले पनि त्यही बाटो पछ्याइन् ।
युवराज दीपेन्द्रले आफ्नै लागि बरौदाका राजकुमारलाई रित्तो हात फर्काएकी देवयानीलाई धोका दिनु उचित सम्झेनन् । प्रेममा उनी कति अन्धा थिए भने २०५८ जेठ १९ गते राति आफ्नै मातापिता, भाइबहिनी, नातेदारलगायत १० जनाको ज्यान जाने गरी गोली चलाए । र, अन्त्यमा उनी आफै पनि मारिए ।
रिपोटर्स नेपाल बाट (https://www.reportersnepal.com/2021/10/599296)